Fiangonan'ny Las Lajas ~ Journey-Assist - Ipiales. Kolombia.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Atsimo » Kolombia » Las lajas
Fiangonan'i Las Lajas. Kolombia. 7km miala an'i Ipiales
Fiangonana Las Lajas - Basilika 7 km miala an'i Ipiales. Iray amin'ireo Tempoly mitsidika indrindra any Colombia (Amerika Atsimo) izy io. Namboarina tamin'ny fomba neo-Gothic havanana teo amin'ny tetezana eo amin'ny alàlan'ny reniranon'i Guaytara.
Tamin'ny taona 1754, teo akaikin'ny tempoly, tao anaty zohy, dia nisy fahagagana niseho tamin'i Virjin'i Maria tamin'ny vehivavy Indiana iray, Maria Muases, izay nanana zanaky ny moana marenina izay tonga marary tampoka sy maty. Nanangana azy ary nanasitrana ny Renin 'Andriamanitra.
Avy eo teo amin'ny rindrin'ny vatolampy dia nisy sarin-jaza feno fahagagana teo amin'ny vehivavy iray. Ary taorian'ny zazalahy moana marenina amin'ny teny Espaniôla dia nampahafantatra ny olona ny fisehoan'ny tarehin'ny Virjiny teo ambonin'ny vatolampy, dia nekena ho fahasitranana ilay sary. Nanomboka teo dia nirohotra nankeny amin'ity kisary ity ireo mpifindra monina avy any Kolombia sy manodidina an'i Ekoatera.
Tamin'ny 1794, dia nisy trano fiangonana kely iray naorina teo akaikin'ny lava-bato, ary roa taona taty aoriana dia nanomboka ny fananganana ny tempoly, izay naharitra 57 taona. Taty aoriana dia nisy tempoly vaovao nipoitra teo amin'ny toerany, ary tamin'ny 1916, ny fananganana 32 taona ny tempoly tamin'ny endrika nisy azy hatramin'izao dia nanomboka tamin'ny volan'ny mpivavaka.
Ny fiangonan'ny fiangonan'ny Las Lajas, kisary eo amin'ny vato iray ao anaty lava-bato ao anaty lava-bato, ny tena sarin'ny Renin'Andriamatoa tsy mbola naverina naverina, fa hatramin'izao dia manaitra ny famirapiratry ny takelaka miloko, izay noheverina fa manamafy ny vato hatrany amin'ny halalin'ny metatra.
Manodidina ny katedraly dia takelaka fahatsiarovana maro be misy fisaorana noho ny fanasitranana natao tamin'ny tarehy mahagaga nandritra ny 250 taona.
Manontany tena aho hoe:
Taona vitsy lasa izay dia nisy vondrona alôlôjika nanatontosa fandinihana ny endrika mahagaga, ary tonga amin'ny fiheverana fa tsy misy sombin-tariby misy ilay vato, ary ny lavaka voajanahary eo amin'ny velarin'ny vato dia nanamafy ny fisian'ny loko amin'ny halalin'ny santimetatra vitsivitsy avy eny ambonin'ny tany.
Nandritra ny tantaran'ny tarehy dia tsy nisy olona afaka nanaporofo ny maha-fomban'izany.
Hatramin'ny 2007, ny fiangonana Las Lajas dia iray amin'ireo fahagagana fito an'i Kolombia.
Ho an'ny mpizahatany sy mpivahiny, fidirana am-piangonana maimaim-poana. Ny fitsipiky ny fampifanarahana ny fahitana ny fitsidihana ny tempoly dia fomba nentim-paharazana ho an'ny fiangonana katolika.
[tp_search_shortcodes slug = "63182a89"]
Ny mpandrindra ny fiangonana Las Lajas
0 ° 48′19 ″ s W. 77 ° 35′10 ″ s e.
Fiangonan'i Las Lajas